गुल्मीमा ७२ वर्षीय वृद्ध दम्पतीको सम्बन्ध विच्छेद !
Law Hub Nepal मंसिर २०, २०७७
काठमाडौं । युवा उमेरदेखि केही उमेर पार गरिसकेका र केही पाका देखिने महिला र पुरुषहरु बीच सम्बन्ध विच्छेदको घटना आजकल सामान्य नै हो । तर ७० वर्षको उमेरमा आएर सम्बन्ध विच्छेद गरेको सुन्दा भने अचम्म लाग्ला ।
गुल्मीमा सम्बन्ध विच्छेदको यस्तै एउटा घटना घटेको छ । ६९ र ७२ वर्ष उमेर पार गर्न लागेका एक वृद्ध दम्पतीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिका-४ वीरबार भट्टेचौर निवासी दुई वृद्ध दम्पतीले गुल्मी जिल्ला अदालतमा शुक्रबार कानूनी रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् ।
७२ वर्षका श्रीमान तीलबहादुर विश्वकर्मा र ६९ वर्षकी श्रीमती बाटुली विश्वकर्मा अन्ततः शुक्रबारदेखि कानुनी रुपमै छुट्टिएका छन् । मुद्दाको प्रक्रिया टुंगिएपछि औपचारिक रुपमै दुवै जना अलग-अलग बनेका हुन् ।
‘बुवाआमा दुवैको सहमति अनुसार सम्बन्ध विच्छेद भएको हो’ तीलबहादुरका माइला छाेरा देवेन्द्र विश्वकर्माले भन्नुभयो ।
आफ्ना पहिलेका श्रीमानकाे निधनपछि बाटुलीले २०५२ सालमा दोस्रो विहेको रुपमा तीलबहादुरसँग विहे गर्नुभएको हो । बाटुलीका ६ जना छोरीहरु छन् । उनीहरु सबैको विहे समेत भैसको छ ।
पछिल्ला श्रीमान तिल बहादुरका हाल एक श्रीमती सहित ६ भाइ छोरा र एक छोरी छन् । तीलबहादुरसँग विहे गरेपछि बाटुलीको कोखबाट जन्मेकी एक छोरी पनि २६ वर्षकी भैसकेकी छन् ।
तीलबहादुर यतिबेला जेठी श्रीमती खगिश्वरा विकसँग बस्दै आएउनुभएकाे छ भने बाटुली आफ्नी कान्छी छोरीसँगै पहिलेका श्रीमानको घरमा हुनुहुन्छ ।
बाटुलीका श्रीमान तीलबहादुरले छोरीहरु सबैको विहे भइसकेका कारण अब बाटुलीलाई घरमै ल्याएर सँगै बसाउन चाहन्थे भने छोरीहरु आमालाई अलग बनाएर राख्नु भन्दा त्यहीँ बस्दै आएको घरमा नै राख्न चाहन्थे । त्यसै कारण बाटुलीलाई जेठी श्रीमतीसँग रहेका श्रीमानसँग गएर बस्नु भन्दा छोरीहरुसँगै त्यही घरमा बस्न ठीक लाग्यो ।
त्यही साेचका कारण उनी छोरीहरुको सल्लाह अनुसार कानूनी रुपमै अलग रहेर बस्ने निधो गरी सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्नुभयो ।
‘बुढेशकालमा छोडपत्र दिएर बस्दा कस्तो हुनेरहेछ भनेर रहर लागेर आएकी हुँ’ ठट्टाको स्वरमा उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘दुईचार वर्ष बाँच्दा किन सधैँभरि झगडा र कचकच गरेर बस्ने ? कान सुन्दैनन् एउटा भन्दा अर्को सुन्ने र झगडा गर्ने बानी छ, त्यही भएर म जान्न बरु डिभोर्स गर्छु भनेकी हुँ ।’
गुल्मीमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । तर गुल्मी जिल्ला अदालतमा ७२ वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेदको घटना भने यो पहिलो हो ।
‘यस अघि ५५ वर्षसम्मका जोडीहरुबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको जानकारी पाएको छु, अदालतमा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरु आउने गर्दछन् तर संभवतः ७२ वर्ष उमेरमा भएको सम्बन्ध विच्छेदको यो नै पहिलो घटना हो’, गुल्मी जिल्ला अदालतका तहसिलदार दिपेन्द्र कुमार तिवारीले भन्नुभयो ।
गुल्मी जिल्ला अदालतमा यस आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भैसकेका छन् । दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्ये २६ वटा फर्स्याैट भैसकेका छन् भने बाँकी २८ वटा फर्स्याैट गर्न बाँकी रहेको तहसिलदार तिवारीले बताउनु भयो । यो समाचार उज्यालो अनलाइनमा जनार्दन घिमिरेले लेखेका छन् ।